सरकारको मुख नताकी नमुना स्कुल बनाए हरिशकिरणले – SidhaRekha
२०७४ फाल्गुन १०, बिहीबार १३:५७ February 22, 2018
तपाई विश्वास गर्नुहुन्छ, एउटा युवाले बिद्यालयका लागि होली, चन्दा र यज्ञ लगाएर २९ लाख रुपियाँ जम्मा गरेर बिद्याललयलाई जिल्लाकै नमुना बिद्यालय बनाउन सक्छ भनेर? हो, गरे के संभव छैन र ! सरकारको मात्रै मुख ताकेर गुनासो गर्नेहरुलाई बैतडीका हरिशकिरण बिष्ट सकारात्मक कर्म गर्नेहरुका लागि प्रेणणाको किरण बन्नुभएको छ ।
सरकारी योजना लैजान मात्रै बिद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा मारामार गर्ने समाजलाई पाठ सिकाउँदै हरिशकिरण बिष्टले जनसहभागितामा २९ लाख रुपियाँ जम्मा गरेर ज्ञानेश्वर माबि सिद्धेश्वरको छ कोठाका तीन वटा पक्की भवन ठडयाएर बिद्यालयलाई जिल्लाकै नमुना सरकारी बिद्यालय बनाउनुभएको छ ।
हरिषकिरण बिष्ट बिद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्नु अघि ज्ञानेश्वर माबिको भौतिक र शैक्षिक अवस्था लथालिङ थियो । २०३२ सालमा साबिकको सिद्धेश्वर ४ (हाल पाटन नगरपालिका ९) मा स्थापना भएको ज्ञानेश्वर माबिमा पाँचसय ५० जना बिद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
‘स्थापनाकालमा अभिभावकले श्रामदानमा बनाएको बिद्यालयको जिर्ण भवन कतिबेला भत्कीने हो भनेर बिद्यार्थी त्रसित हुन्थे । ज्ञानेश्वर माबि राजमार्ग छेउमै भए पनि सरकारको आँखा नपुग्दा दुर्गमको भन्दा दयनीय अवस्था थियो । सरकारको मात्र मुख किन ताक्ने भनेर स्थानीय अभिभावकहरुलाई हामी आफैले केही गर्नु पर्छ भनेर काम थाल्दा यस्तो परिवर्तन भयो,’ बिष्टले भन्नुभयो ।
बैतडी जिल्लाको कुनै नमुना सरकारी बिद्याालय हेर्नु पर्यो भने अहिले सबैको आकर्षण बनेको छ – ज्ञानेश्वर माबि खोड्पे । कक्षा १२ सम्म पढाईहुने ज्ञानेश्वर माबिमा शिशुदेखि कक्षा पाँचसम्म अभिभावको पहलमा बनेको भवनहरु भौतिक र शैक्षिकरुपमा निकै लोभ लाग्दा देखिन्छन् । कक्षा कोठामा बिछ्याईएका उनी कार्पेटमाथि राखिएका शैक्षिक सामग्रीले बिद्यार्थीहरुलाई हुरुक्कै बनाएको छ । निजी बोर्डिङ छोडेर अभिभावहरु अहिले ज्ञानेश्वर माबिमा बालबालिका भर्ना गर्ने गरेको बिद्यालयले जानकारी दिएको छ ।
ज्ञानेश्वर माबिको शिशु कक्षामा मात्रै ५५ जना बालबालिका अध्ययनरत छन् । बिडम्बना ! शिशु कक्षामा सरकारी दरबन्दी छैन । ‘दरबन्दी नहुँदा बिद्यालयले आफ्नै पहलमा शिक्षक नियुक्ति गरेर पठनपाठन भईरहेको छ । शिशु दरबन्दीका लागि माग गरे पनि कुनै सुनुवाई भएन । ’ अध्यक्ष बिष्टले गुनासो गर्नुभयो । जिल्ला सदरमुकाममा एक जना पनि शिशु बालबालिका नभएको बिद्यालयमा दुई÷दुई दरबन्दी छन् तर, कुना कन्दरामा बस्ने बालबालिकाले शिक्षक पाउन नसकेको अभिभावको गुनासो छ ।
शिक्षा क्षेत्रको यस्तो दुरावस्था देखेर सुरुवातमा आफै काम गरेर देखाउँछु भन्दा हरिशकिरणलाई कसैले पत्याएन तर, जब हरिशकिरणले आफ्नै खल्तीबाट ७५ हजार रुपियाँ लगानी गरेर बिद्यालयको भौतिक अवस्था सुधार गर्न तम्सिनुभयो तब, सबै अभिभावले साथ दिएको बिष्ट सम्झिनुहुन्छ ।
ज्ञानेश्वर माबिमा अहिले प्राविधिक शिक्षातर्फ सब ओभरसियर पढाई संचालनमा रहेको बिद्यालयले जानकारी दिएको छ । प्राविधिक शिक्षातर्फ अहिले २५ जना बिद्यार्थी कक्षा ११ मा भर्ना भएर पठनपाठन सुचारु भएको बिद्यालयका प्रधानाध्यापक तर्कराज भट्टले जानकारी दिनुभयो ।
बिद्यालयले यस्तो सफलता हासिल गर्न बिद्यालयका प्रधानाध्यापक तर्कराज भट्टको महत्वपर्ण सहयोग रहेको अध्यक्ष बिष्टले बताउनुभयो । स्थानीय अभिभावकहरुले अहिले गफ गर्नेभन्दा पनि काम गर्ने मान्छे चिन्न थालेका छन् ।
शिक्षक र अभिभावकको सक्रिय सहयोगले ज्ञानेश्वर माबिमा खानेपानी, शौचालय, चौर र शिक्षण सामग्रीको अनुपम प्रयोग देख्न सकिन्छ । नमुना बिद्याय निरीक्षण गर्नुपर्यो भने ज्ञानेश्वर माबि नै सबैको रोजाईमा पर्ने गरेको निमित्त जिल्ला शिक्षा अधिकारी शंकरदत्त भटट् बताउनुहुन्छ ।
ज्ञानेश्वर माबि रहेको साबिकको सिद्धेश्वर गाविस जिल्लाकै पहिलो मालमैत्री गाविस हो । हाल सिद्धेश्वर पाटन नगरपालिका वडा नंं ९ मा रहेको छ । सिद्धेश्वरलाई जिल्लाकै पहिलो बालमैत्री गाविस घोषणा गर्न ज्ञानेश्वर माबिले महत्वपूर्ण सहयोग गरेको अध्यक्ष बिष्टले बताउनुभयो । ‘ बालबालिकाको भावना बुझ्नेले मात्र बालमैत्री वडा या गाउँ÷नगरपालिकाको महत्व बुज्दछन् । हामी बैतडी जिल्लामा केही नमुना काम गरेर देखाउँने अभियानमा छौं ।’ बिष्टले भन्नुभयो ।
अघिल्लोबुवाले खुकुरीले काट्ने धम्की दिएपछि बालकको बिचल्ली
पछिल्लोमाओवादी केन्द्रका तीन नेतामाथि कारवाही